Kulesi sihloko, sizobheka indlela yokugcoba inyama yepikinikini. Kunezinhlobo zokupheka eziningi.
Ukuhamba ngaphandle kwedolobha, ithuba lokuchitha isikhathi nomndeni noma abangane - enye yezintandokazi zokuzijabulisa. Futhi-ke, akukho picnicki engayenza ngaphandle kwendabuko ye-shish kebab, iresiphi yokupheka okuyinto wonke umuntu anayo.
Izingxabano mayelana nendlela yokudoba inyama, ekugcineni phakathi kwababukeli balo mkhiqizo akuyona iminyaka eyishumi. Impendulo engenamqondo yalo mbuzo, mhlawumbe, ngeke itholakale, okusho ukuthi inani lokupheka okungavamile nelithakazelisayo liyokhula. Kakade namuhla, ungathola inqwaba, uma kungenamakhulu izindlela zokulungisa inyama yezokugaya okuzayo.
Njengoba emndenini wethu epheka shish kebab - isici esibalulekile sokuhamba ehlobo ezweni kanye nemihlangano ebusika enobungane emvelweni, nganquma ukukutshela indlela esiyipheka ngayo ngokujwayelekile. Angicabangi ukuthi lo mlando uzoba isambulo somuntu. Esikhundleni salokho, ngizophinda ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngidlulise zonke izindlela zokudabukela ezijwayelekile.
Izindlela zokulungiselela ukudla
Ngaphambi kokukhetha inyama, udinga ukuyithenga. Wonke umuntu unezintandokazi zakhe zokuncintisana. Sivame ukuthatha uginya lwensimbi yengulube, izingqimba ezincane noma izingxenye zentanyeni ithambo. Ngokungajwayelekile, iwundlu lisetshenzisiwe, ngoba akulula ukuthola uhlamvu lwenyama "olufanele". Kodwa-ke, uma inhlanhla imomotheka, sithatha inyama yomlenze wangemuva noma i-entcote namafutha amancane amancane. Okukhethwa kahle - izinhlobo ezimbili zenyama. Kubaluleke kakhulu ukuthi kubunwe, kuhle, ngesikhathi sethu sokuthenga lokhu akuyona inkinga.
Ngakho, inyama ithengwa. I-Pulp ngaphandle kwemimoya esinqunyiwe sibe yingxenye yezingcezu ngobukhulu kancane ngaphezu kwebhokisi lomdlalo. I-entrecote nentamo etsheni ithambo libe ngama-halves, kodwa akudingekile. Manje ungaqhubeka nomsebenzi oyinhloko. Into esemqoka ngalesi sigaba ukuza ngokuvumelana nabo bonke amalungu omndeni nabangane endabeni yokukhipha inyama ye-shish kebab. Uma ukhetho lwenziwa, ungaqhubeka. Okubalulekile: izinhlobo ezihlukahlukene zenyama zikhethwe ngokwahlukana.
Okuvame kakhulu futhi, mhlawumbe, ngokuthandwa yibo bonke. Sinquma u-anyanisi emicircle noma amasongo. Asizisoli ngokuthi imifino "ibuhlungu". Angizange ngicabange ukulingana, ngimane nje: ungqimba lwenyama, bese sibeka u-anyanisi ukuze uvale ngokuphelele inyama. Solim, pepper, njengoba unembeza uzovumela, kodwa ngosawoti akudingekile ukuba ngentshiseko, ngaphandle kwalokho sengozini yokunciphisa inyama juiciness. Muva nje, ngimshiya ngaphandle kwenqubo ngokuphelele.
Ngemuva kokuthi izingqimba zibekwa, siqala ukuzihlanganisa, njengenhlama, kuphela ngomzamo ongaphansi. Uma inyama no-anyanisi banika ijusi elincanyana - sibathumela epanini ngaphansi komshini wokunyakaza. Ngemuva kwamahora ambalwa ungaqala ukupheka, kodwa ungalungiselela futhi kusihlwa, ungakhohlwa ukuyifaka esiqandisini. Labo abathanda uviniga "ubuhlungu", akuvunyelwe ukwengeza uviniga (noma ijusi lesigamu selamula), kodwa isikhathi sokudoba kwawo sinciphise kakhulu.
Le nguqulo ihluke kakhulu kokudlule. Emanzini amathisade afaka utamatisi osikiwe, imifino oyintandokazi, amaqabunga amasha kanye nama-black currant efihlekile nanoma yikuphi amanzi amaminerali angenawo ukunambitheka okuveziwe. Izifo kufanele zibe ngokwanele, kodwa inyama akufanele ihambisane nayo. Ukuthinta amajezi lapha kukhona i-currant, inikeza i-aftertaste eyithakazelisayo kakhulu, kodwa okokuqala kungcono ukwenza okuncane "ekuvivinyweni".
Umfowenu wesine wesibili, kuphela esilawula i-currant, futhi sishintshe amanzi amaminerali nge-tan noma i-ayran. Abantu abaningi bathi ungakwazi ukudlala e-kefir, kodwa angizange ngifake.
Iwundlu, kuphela indlela yokuqala ehle. Into esemqoka - ungakhohlwa ukusika izingcezu ze-pulp ngamanoni amafutha. Kulimaza kakhulu, kodwa kunambitha kakhulu.
Ngaphambi kokufisa inyama is threaded phezu skewers, silungiselela entrecotes on the grill. Ngesikhathi esifanayo nenyama ku-grill, ungabhaka ama-assortment yemifino. Ama-eggplants, i-zucchini, utamatisi obukhulu kanye no-anyanisi (ungathatha lowo owawuse-marinade) uthathe imibuthano engekho ngaphezu kwengxenye yecentimitha ebanzi futhi ubambe phezu kwamalahle kuze kube khona ukukhanya kwe-brown golden. Etafuleni sifaka imifino eminingi, imifino, inyama, i-lavash encane (izingane zithanda ukumboza inyama kulo), izambatho zendabuko zendabuko kanye nokushiswa kukaTabasco noma u-Abaneiro.
Indlela yokudoba inyama nge-shish kebab, nokuthi yini okufanele uyikhonze? Impendulo enembile kunazo zonke izokuba yilabo kuphela i-flair yakho ye-culinary kanye nenambitha. Ukunqoba i-shish kebab emzimbeni omuhle kunzima kakhulu.